Gaas Oo Quus ka Muujiyay xalka Gaarista Khilaafka Puntland Iyo Ciidanka PSF AwdalMedia Awdalmedia Gaas Oo Quus ka Muujiyay xalka Gaarista Khilaafka Puntland Iyo Ciidanka PSF
Gaas Oo Quus ka Muujiyay xalka Gaarista Khilaafka Puntland Iyo Ciidanka PSF
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya marna soo noqday Madaxweynaha Puntland Cabduweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka jadlay mowqifkiisa bayaankii kasoo baxay Isimada Puntland ee la xiriirtay arrimaha ku saabsan xalinta khilaafka Xukuumadda Puntland iyo Taliska PSF.
Cabduweli Gaas wuxuu sheegay in Shaqsyan uusan diidaneyn dhamaan waxyaabaha ku qoran Bayaanka Isimada, balae ay diyaar u ahaayeen inay wax la saxaan, maadaama Bayaanka ay kujiraan qodobo aad u farabadan oo kasii faah faahsan qoraaladii horay loo soo saaray.
Wuxuu hadalkiisa uu intaasi kudaray in arrinta kusaabsan dekadda Boosaaso ay aheyd in lagala hadlo Xukuimadda, sidoo kalena ay iyaga kala jadli kareen Isimada balse aan laga siin wax fursad ah.
Ugu dambeyn Cabduweli Gaas wuxuu sheegay in Bayaanka Isimada ay soo saareen weli wada-hadal laga geli karo, balse siyaasiyiintooda halkaas uga hareen Arrinta Boosaaso oo aysan ku laaban doonin, isaga oo sheegay in Xukuumadda Puntland iyo dhamaan dadka Reer Puntland ay howsha u taallo.
“M/Biixi Hadii Uu Eeyar Joogi Waayo Madaxweyne Ahaan Maayo.” Faysal Cali Waraabe
Farmaajo Oo khadka Telfoon kula Hadlay Madaxweynaha Liibiya